Ịmụ asụsụ mmụta maka ndị njem | Otu Di na Nwunye
Achọrọ ịmụta asụsụ maka naanị $5?
Chọrọ ịmụta otú e si eme ya na nanị otu izu?
Ebumnuche nke Di na Nwunye maka "Ọmụmụ Ihe Ịmụta Ọmụmụ maka Ndị njem" bụ inyere ndị njem aka, dị ka onwe gị ghọta ihe ndị dị mkpa nke asụsụ ọ bụla ka i wee nwee ike ịgagharị ma kwurịta okwu n'atụghị egwu. Anyị chọrọ inyere gị aka asụ asụsụ mba ọzọ mgbe ị na-ejegharị na-enwekwu obi ike, ma na-amụ ngwa ngwa karịa ka ọ bụla asụsụ ndị ọzọ na-eduzi!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga na mfe jụọ ndị obodo ebe aga, na- kelee ha n'asụsụ ala ha, ka kporie onwe gi nye ha, na itinye aka na mkparịta ụka, mkparịta ụka bụ isi - nke a bụ onye ndu gi!
Nduzi na-eduzi na Spanish
Onye na-eduzi na French
Ntuziaka na Ịtali
Site na ntuziaka ndị a, ị ga-amụta otú e si:
Kọwaa onwe gị
Na-ebute ekele maka isi
Jụọ ndị mmadụ ebe ha si, na ihe ha na-eme maka ndụ
Chọpụta ebe kacha mma ị ga-aga, ebe ọ bụla, si obodo ndị ahụ maara n'ezie azịza ya!
Iji ntuziaka nduzi anyị na ntụziaka mmụta, ị ga agaghị efufu, na nọrọ jụụ!
Mụta nọmba ya ị nwere ike ịgụ, ahịa, kwụọ ụgwọ ngwongwo gị, ma jide n'aka na ị nweta mgbe niile!
Mụta ihe nri ịtụ, Otú kwuo ya, na otu ị ga-esi mee ya dị ka esiri ya!
Kwanye ihe ọṅụṅụ, n'ebe ọ bụla!
Mmetụta ndị njem ibe gị, ndị obodo, na ọbụna onwe gị na ozi ị nwere ike ịmụta n'ime ụbọchị, na ọbụna were Na-aga!
Ọmụmụ ihe asụsụ anyị dị mfe ibudata, obere, na dị na ngwaọrụ ọ bụla
Ezubere nke ọma maka ngwa ngwa ịkọwa ihe ị ga - ekwu, mgbe ịkwesịrị ịsị ya - mgbe ị na-eme njem!
Kedu ihe nke ahụ pụtara? Enweghi ike ịmụ asụsụ dị ka a...
Echiche dị n'azụ usoro nke A Couple for Road Traveler Guides dị mfe - Ngwa ngwa.
Anyị chọrọ ka nke a dị mfe, nke bara uru, na ị nwere ike ozugbo ịzụta nduzi a, na n'ime nkeji nwere ike ikwurịta okwu na onye mba ọzọ mgbe ị na-eme njem.
Pịa na Nduzi Asụsụ Ị Chọrọ, na Ịmalite Ịmụta Taa!
Ọzọkwa na-abịa n'isi nso .... German, Russian, Greek, na Portuguese!
Bụrụ onye mbụ ịchọta banyere ntụgharị asụsụ ọhụrụ na njem njem!
Debanye aha taa!